Sheekada filimka Nela Ticket: Ravi Teja markaan filim wanaagsan kuma dhicin – Filimside.net
Taariikhda: May 26, 2018
Superstar-ka reer Telugu Ravi Teja waxaa Jimcadii ama shalay tiyaatarada loo saaray filimka Telugu ah Nela Ticket oo Action, shactiro iyo qiiro isku jirto ah.
Jilaayaasha: Ravi Teja, Jagpathi Babu, Malavika Sharma
Rating: 1.5/5 (Hal Xidig iyo Bar)
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 46-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan Filimkaan: Ravi Teja mada daaladiisa dhameestiran Action ahaan iyo shactiro ahaan iyo sidoo kale Action-mada uu sameeyo haka reebin sidoo kale Jagapathi Babu doorkiisa laadarnimo inuu heer sare yahay.
Muxuu Ku Liitaa Filimkaan: Waan ka xunahay Ravi Reja 2-saac iyo 46-daqiiqo filim soconaayo oo aan nuxur laheyn ayuu sameeyay sheekadiisana wax cusub ma ahan si wacana looma dhigin.
Fariinta filimka Nela Ticket Oo Kooban: Nela Ticket(Ravi Teja) waa wiil agoonimo kusoo bar baaray sidoo kalena u taagan dadka masaakiinta ah inuu garab istaago.
Maalin maal maha ka mid ah wuxuu Nela Ticket (Ravi Teja) garaacaa tuugo uusan heebtooda aqoonin balse hoos tagaan wasiirka awooda badan ee lagu magacaabo Aditya Bhupati(Jagapathi Babu).
Sidaa darteed Nela Ticket (Ravi Teja) iyo Aditya Bhupati(Jagapathi Babu) waxaa ka dhex bilaabanayo dagaal aan waxba la isku reebanin iyo xasuuso hore oo ah inay colaad horey kaga dhaxeyn jirtay.
Waxaana xusid mudan wasiir Aditya Bhupati(Jagapathi Babu) inuu aabihiis dil qorsheesan kaga taqalusay si uu kusriga wasiirnimo u helo waana nin aan dadka u nixin ee kaliya dantiisa mudnaanta kowaad siiyo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Nela Ticket: Director Kalyan Krishna dadaalkiisa gaabis weyn ayaa ka muuqdo si wacana sheekada filimkaan ma uusan isugu daba ridin sidoo kalena waa mid ka mid ah filimada ugu liito oo ay Telugu sanadkaan sameeyaan madaama isku xir wacan loo sameynin filimka Nela Ticket.
Bandhiga Jilaayaasha: Ravi Teja marnaba kuma niyad jebinaayo xitaa filim liito wuxuu awoodaa inuu dadka mada daaliyo markaana si wacan ayuu doorkiisa u matalay, balse sheeko aan nuxur laheyn cidna garbaha kuma qaadan karto.
Ruug cadaa Jagapathi Babu marwalbo uu shaashada kasoo muuqdo saameyn ayuu leeyahay wuxuuna ka mid yahay shaqsiyaadka filimkaan loo daawan karo.
Atirishada Malavika Sharma micno kuma lahan filimkaan kaliya inay heeso ku leedahay sidoo kalena dhamaan jilaayaasha kale kasoo muuqdeen iyagana waa la mid ah saameyn muuqato lama aysan imaanin.
Gunaanad: Ravi Teja markaan filim fiican kuma dhicin sidaa darteed mashruuca Nela Ticket ma ahan mid guuleesan doono waana filim Ravi si lama filaan ah ku doortay sameyntiisa si lama filaan ahna Boxoffice-ka ugu fashilmi doono!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Nela Ticket: